Nagu saabsan - Zaili Engineering Makiinado Co., Ltd.
Zaili Engineering Makiinado Co., Ltd.
Zaili Injineernimada Mashiinnada Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha xirfadleyda ah ee kala jejebiyeyaasha Haydarooliga, xiirta korantada, garoobada hareeraha, isku-xidhka degdega ah iyo dubba dubbaha Iyada oo diiradda saareysa cilmi-baarista, horumarinta iyo soo-saarista jabka, shirkaddu waxay soo bandhigtay in ka badan 30 nooc oo ah soo-saar sare iyo qalab tijaabo ah oo ka imanaya dal iyo dibad. Shirkaddu waxay leedahay nidaam wax soo saar dhameystiran sida mashiinka, kormeerka, isku imaatinka, tijaabinta, xirxirida IWM Iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo loo maareeyo habka wax soo saarka, alaabooyinku waxay leeyihiin astaamo tayo sare leh, xasilooni sare, farsamo yaqaan la safeeyey iyo cimri dherer, waxaana si wanaagsan u qaabilay macaamiisha. dal iyo dibadba.
Shirkadda ayaa ka gudubtay heerka caalamiga ah ee ISO9001-2000 iyo shahaadada CE. Waxay leedahay nidaam maareyn tayo leh oo adag iyo adeegga iibka kadib. Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay aasaastay iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah oo lala galay shirkado badan oo burburka gudaha iyo Kuuriya ah.
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa ruuxa ganacsiga ee "midnimada, shaqada adag, pragmatism iyo hal-abuurnimada" iyo falsafadda ganacsiga ee "daacadnimada, halbeegga, waxtarka iyo xasilloonida". Had iyo jeer waxay ku adkeysaneysaa in danaha macaamiisha ay ka sarreeyaan wax kasta, oo ay ku haminayaan inay noqdaan warshad xirfad u leh jabinta dubbayaasha. "Shaqada sifiican u samee oo ku qanci kuwa isticmaala" waa baacsigeena aan kala go'ayn!
Ruux shirkadeed: adkaysi, ku dadaal inaad kaamil ahaato, si joogto ah uga gudub
Aragtida shirkadda: inay noqoto soo saaraha soosaarayaasha kaabayaasha qodista
Himilada: Si aad u noqotid soo saaraha hormuudka ah dubbayaal jabsada Haydarooliga
Falsafadda ganacsiga: daacadnimada ku saleysan, hal-abuurnimada nafta
Siyaasad tayo leh: taxaddar leh, sii wanaajinta, siinta macaamiisha waxsoosaar tayo leh iyo adeegyo lagu qanco, si nidaamka maareynta tayada shirkaddu si joogto ah loo wanaajiyo.
Nooca Aamusnaanta ee Jabiyaha, Shear For Excavator, Hb Jebiyaha Taxanaha, Xakamee Walxaha Wixii Jabiyaha, Qulqulka Qashinka, Burburin Waayo, Excavator,